NEPALI JOKES FOR FUN: FUNNY NEPALI JOKES-2
राम:- मेरो काठको खुट्टाले सधैँ दु:ख दिईरहन्छ।
हरि:- कमाल छ ! काठको खुट्टाले तँलाई कसरी दु:ख दिन्छ?
राम:- आज मेरी पत्नीले मलाई काठको खुट्टाले टाउकोमा हानी।
पति:- ‘म तिमीबिना जीवित रहन सक्दिन।‘
पत्नी:- त अहिलेसम्म किन नमरेको
शिक्षक :-तँलाई गधा !यति पनि आउँदैन?राम :- सर पनि खालि गधा गधा मात्र भन्नुहुन्छ । कहिले पनि राम भनेर बोलाउनु हुन्न।(अर्कोदिन रामले सरको अगाडि डाक्टर लिएर आउँछ)राम:- नमस्ते सर !शिक्षक :-नमस्कार ! अनि तँ गधाले चाहिँ डाक्टर किन बोलाएको नि?राम :-के गर्नु त सर !तपाई मलाई गधा मात्र देख्न्नु हुन्छ । त्यही भएर तपाईको आँखा जचाउन ल्याएको नि! न्यायधिस :-तिमीलाई पटक पटक अदालत आउन लाज लाग्दैन?"चोर :- हजुर म त कहिलेकाहीँ मात्र आउँछु तर तपाई त दिनदिनै आउनुहुन्छ। लाज त तपाईलाई लाग्नुपर्ने नि!
एकजना मान्छे साडी बेच्दै थियो । त्यहिबेला हुरी चल्न थाल्यो । हुरी आउँदा मानछेको धोती नै उडाएर लगेछ।त्यसपछि चट्याङ पर्यो। चट्याङ परेपछि त्यो मान्छेले चट्याङले फोटो खिचेजस्तै मानेर भनेछ॒:-हे भगवान!तिमी यो धोती
फुकालेर किन फोटो खिच्दैछौ ?
एकजना माग्ने बाटोमा बसिरहेको थियो । एक भलादमी त्यही बाटो हिड्दैँ थिए।माग्ने: दाई एक रुपैयाँ दिनुहोस् न।भलादमी : एक सुका पनि छैन।माग्ने : त्यसो भए आउनुस् सँगै बसेर मागौँ। विधार्थी :"सर मलाई जसरी भएपनि पास गराईदिनू। अहिले पास भइनँ भने त मेरो जहाजै डुब्छ।"शिक्षक : स्कूल आउँदा लुरुलुरु हिडेँर आउँछौ। साईकल त छैन तिम्रो जहाज डुब्छ भन्छौ। प्रेमिकाले प्रभावको छातीमा हात राख्दै भनिछे:प्रेमिका: तिम्रो दिल त पत्थर जस्तै कडा छ।प्रेमी : (हास्दैँ) होइन डालिङ,तिम्रो हात त मेरो गोजीको लाईटर माथि छ।
दुईजना नेताहरु हेलिकप्टरमा चढेर बाढिग्रस्त निरिक्षण गरिरहेका थिए।
पहिलो नेता: यदिँ मैले यहाँबाट ५०० को नोट फ्याँके भने ती पिडित जनता कति खुसी होलान हगि?
पाईलट: यदि मैले तपाईहरु दुवैलाई यहाँबाट फ्याँके भने ती जनताहरु सबैभन्दा बढि खुसी हुन्छन।
शिक्षक: ल भन त हरि,राम किन वनबास गएका थिएँ?हरि : सर काठ चिर्न गएका होलान् ।
सिधै घर आउने गर
आमा-तँ यति धेरै अबेरसम्म बाहिर रहेको म सहन सक्दिन।
आमा-म केहि पनि सुन्न चाहान्न । तँ अब कलेजबाट सिधै घर आउने गर।
छोरी-तर आमा म कुनै बच्ची त होइन।
फोन त्यही कुकुरले गरेको थियो
पत्नी-यो लुसी को हो?
पति-‘अरे,यो त कुकुर हो, जसलाई म किन्न चाहान्थेँ
पत्नी-ओ ! त्यसो हो भने आज पाँच पटक फोन त्यही कुकुरले गरेको थियो।
मेरो प्रेम अमर छ।
पत्नी-के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पति-बिना शक।पत्नी-त्यसो भए तिमी मेरो लागि मर्न पनि सक्छौ? पति-सक्दिन प्रिय,मेरो प्रेम अमर छ।
मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि दूध उम्लेको समय ध्यान राख्न्नू तै पनि तिमीले ध्यान दिएनौँ-पत्नी आफ्नो पतिसँग रिसाई
मैले ध्यान दिएको थिएँ ,दूध दश बजेर तीस मिनेटमा उम्लेको थियो-पतिले शान्तसँग भन्यो।
फैसला सुनाउन भन्दा पहिले जर्जले अपराधीसगँ सोध्यो-‘तिमी पहिला कहिले जेल गएका थियौ?
अपराधीको आखाँमा आशुँ आउन सुरु भयो। उसले रुदै रुदै जवाफ दियो-छैन हजुर ,म पहिला कहिले जेल गएको छैन।
ठीकै छ। जर्जले सहयोगको भावनामा भन्यो-रुन्छस् किन? म अब पठाइदिउँला।
पहिला नरामो खबर सुना
नोकर-मालिक तपाईको लागि धेरै नरामो खबर छ।
नोकर-तपाईकी पत्नी तपाईको छिमेकीसगँ भागिछे।
मालिक- पहिला नरामो खबर सुना।
अनुहार त बिल्कुल देख्दिन
पतिसगँ पत्नी कार चलाउन सिक्दै थिई,पतिलाई भनि-यो सामुन्नेको सिसा ठिकसगँ लगाएको छैन।
किन,के गडबड छ ?-पतिले सोध्यो।
यसमा म पछाडिबाट आएको कार देख्छु तर आफ्नो अनुहार त बिल्कुलै देख्दिन।
पत्नी-के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?
पत्नी-त्यसो भए तिमी मेरो लागि मर्न पनि सक्छौ?
पति-सक्दिन प्रिय,मेरो प्रेम अमर छ।
ध्यान दिएको थिएँ।
पत्नि सँग शीर उठाएर
एक साथी-तैले अग्लो केटीसँग विवाह किन गरेको?
अर्को साथी- ता कि म पत्नीसँग शीर उठाएर कुरा गर्न सकौँ।
त्यसपछि मलाई कसले बचाउँछ?
एक फिल्म डाइरेक्टरले हिरोइनको नजिक आएर उसलाई सीन सम्झाउँदै भन्यो-तिमीलाई नदिमा झर्नबाट हिरोले बचाउँछ र आफ्नो काँधमा राखेर नदिको तटमा रहेको डाक बगाँलामा लिएर जान्छ।
हिरोनीले गम्भीर भएर भनी-तब त्यसपछि मलाई कसले बचाउँछ।
धेरै गडबड भएको थियो
एक मान्छेको पत्नी एकाएक कतै गायब भई।
हामीले सुन्यौ तपाईकी पत्नी कतै गायब भइन रे –कसैले सोध्यो।
हो,तपाईले ठिक सुन्नु भयो-उतर मिल्यो।
पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु भयो?
अधिल्लो चोटि मेरी पत्नि गायब भएकी थिइ ,मैले पुलिसमा रिपोर्ट लेखाएकी थिएँ।त्यसबेला धेरै गडबड भएको थियो।
पुलिसले उसलाई खोजेर ल्याएका थिए।
एक पटक भनेको कुरा कहिले काट् दिन
प्रेमी –डार्लिङ तिमो उमेर कति हो्?
प्रेमी-तर दुई बर्ष अगाडि त तिमीले आफ्नो उमेर यहि नै बताएकी थियौँ।
प्रेमिका-‘म एक पटक भनेको कुरा कहिले काट्दिन।
हबाईजहाज लिएर आइजन त
एक रक्सीले मातिएको मान्छे एयरपोर्ट बाहिर उभिएको थियो। एक युबक त्यतैबाट आउदै थियो।
ओए!-रक्सीले मातिएको मान्छे बोल्यो-एउटा ट्याक्सी लिएर आइज।
अन्धो होस् के? युबक रिसाएर बोल्यो-म पाइलट हुँ,ट्याक्सी डाइभर होइन।
त दु:ख किन मान्छस्,एउटा हबाइजहाज लिएर आइज त- रक्सीले चुर भएको युबक बोल्यो।
सधैँ ढोकाको प्वालबाट हेर्छु।
होटेल मालिकसग-‘हेर्नुहोस्, तपाई सधैँ यसरी कोठामा नआउनुहोस्। कमसे कम आउँदा ढोका त खट्खटाउनहोस् ,के थाहा म कोठामा कुन हालतमा हुन्छु र तपाई भि पस्नुहुन्छ।
होटेल मालिक-नहडबडाउनुस् मेडम ! म सधैँ ढोकाको प्बालबाट हेर्छु अनि मा भि आउछु।
आधा करोड पनि त कम होइन
कबाडी बजारमा पुराना किताब बेचबिखन भईरहेको थियो। गाहकले एक पुरानो किताब उठायो। जसको नाम थियो-करोडपति कसरी बन्ने?तर किताबको आधा पेज गायब थियो। गाहकले दोकानदारलाई सोध्यो-‘यो लिदाँ के फाईदा किनकि यसको त आधा पेज नै छैन।
तर आधा करोड रुपियाँ पनि त कम होइन। दोकानदारले भन्यो।
पच्चीस बर्षकै रहन्छु
प्रेमी- मैले निश्चय गरे कि म पच्चीस पुगेपछि बिबाह गर्छु।
प्रेमिका- मैले पनि निश्चय गरे कि जबसम्म मेरो बिबाह हुदैँन तबसम्म म पनि पच्चीस बर्षकै रहन्छु।
तीनजना साथी आ-आफ्नो पत्नीका बारेमा कुराकानी गरिरहेका थिए।
पहिलो-मेरी पत्नी यति मोटी छे कि ऊ टागामा बसि भने टागाको चक्का नै भाचिन्छ।
दासो्- मेरी पत्नी यति धेरै मोटी छे कि यदि ऊ रिक्सामा बस्न गई भने रिक्साबालाले उसलाई बसाउन इन्कार गर्छ।
तेसो्- मेरी पत्नी यति मोटि छे कि म धोबीकोमा उसको पेटीकोट सफाई गर्नका लागि गएको थिए तब धोबीले भन्यो कि यहाँ टेन्ट सफाई गरिदैन।
दुई युबती आपसमा बसेर कुरा गर्दै थिए। अचानक एकको नजर अर्कोको हात माथि पर्यो।
ऊ बोली-अरे ! तैले बिबाहको औठी गलत औलामा लगाइ राखेकी छेस्।
दोसो्ती बोली-हो थाहा छ । मैले बिबाह पनि गलत मान्छेसग गरेकी थिए।
गा्हकले होटेलको काउन्टरमा आएर भन्यो-‘भाई मजा आयो।तिमो् आइसकि्म खाएर त दिमागमा ठण्डा नशा छायो,अब यसलाई हटाउनका लागि कुनै चीज त होला।
छ हजुर ,मेनेजरले भन्यो-“यो लिनुहोस बिल।‘एकादेशमा एटा मान्छे थियो । एकदिन घर आएर आफ्नो बुढीलाई भनेछ ः हेर न बुढी आजकालका केटाकेटी मात्तिएर टाउकोमा टेक्न थालिसके भन्या । बुढी - टाउकोमा तेल लगाएर हिड्नुस न चिल्पेर लडिहाल्छन्न नि
Posted by rupak nepali at 10:08 PM